Author: Mimuro Shakak
Hadduu ku koobnaado saamaynta falka falihiisa sida: Lahaanshaha erayga waa sida: Hamzada goyntase waa sida: Waa tan ugu muhiimsan oo waa dhawaaqtada dhow, fog iyo gargaarsashadaba sida: HARGEISA HOL — Tension is mounting in northern Somalia after the breakaway Somaliland republic deployed hundreds of troops and battlewagons outside a town controlled by a rival regional state in what many see as a precursor of a new military incursion.
Iyo qeeybo badan oo qodobadaan soo hoos gali doona. Falka kordhaha ahina waa kan lagu kordhiyey xaraf iyo wax ka badan sida: Koox kasta oo iskabadasha qaabkeeda keliga ayaa la yiraahdaa koox matoosane sida: Markaan ogaanay kabacdi in Carabiga soomaalidu barato kan qoraalka iyo idaacadah B Magaca ka maran xarafka dheeraadka ah asalkiisa ayaa la yiraahdaa magaca makordhaha, wuxuuna u kala baxaa saddax:.
Hundreds of security officers deployed carabiha Lamu – Daily Nation.
Sabti, Maarso 12, HOL — Wasiirrada Arrimaha Dibadda Jaamacadda Carabta ayaa ku baaqay in cunno-qabateynta hubka laga Somalia, waxayna soo dhaweeyeen hormarka amni, dhaqaale iyo siyaasadeed ee ay Somalia ku tallaabsatay.
Weerta ku bilaabata fal sida: Newer Post Older Post Home. La socotada waxay wada socodsiisaa laba eray iyadoo ka dhigaysa isku shaqal ama reeb sida: Xarfaha macnayaalkooda waxay u kala baxaan shan qaybood: Waxaa kaloo ay qaadataa laamka muujiyahiisu ay tahay fogaanshaha sida: Waxay noqotaa xaraf dheeraad ah iyadoo erayga qurxineysa sida: Magaca qalabka waa sida: Marka weerta lagu sheego falaha falka sida: Meeqa lacag ah ayaad heysataa?
Cali, Faarax iyo Maxamed oo ay Soomaalida aad u wada taqaan, asal ahaana ah magacyo Carbeed.
Qaarna waxay isubedelaan hal qaab, falkaasi ayaana la yiraahdaa ismabedelaha. Weerta magaca ah waxay ka kooban tahay yeelaha iyo sheegtada sida: Kusoo dhawow boga barashada Carabiga lagu hadlo lahjadaha.
Alif gaabka waa sida: Kawaran xaalada walaalahaa Muna iyo Amaal? Casharkanku waxa uu ku sabsanyahay salaanta iyo Barashada luuqada carbiga ee lagu hadlo.
Waxaad fadlan kala soo xiriiri kartaa cinwaankiisa bariidka xaasuubka: Please enter an answer in digits: Leave A Reply Cancel reply Your email address will not be published. B Waa barasshada qaataa mid ka mida xarafyada joogtada alifka ama hamzada qofka hadlaya kaligiis: Eeg Shuruudaha adeegsiga ee faahfaahinta. Hamzada dhajisada waa sida: B Kalasaaraha gaarka ah waa sida: Magaca aan loogu yeerin wax gaar ah waxaa la yiraahdaa lamagarto sida: Magacyada asalka ah cxrabiga toddobo: Haddii ay ku bilaabato ta’da dheeraadka ah, ismabedelayso: